Diego Maradona Oo Beeniyay In Uu U Dhimanayo Xanuun Aan Daawo Lahayn Oo Warbaahinta Dalkiisa Argentina Ay Baahisay. - Gool24.Net
Diego Maradona Oo Beeniyay In Uu U Dhimanayo Xanuun Aan Daawo Lahayn Oo Warbaahinta Dalkiisa Argentina Ay Baahisay.
Halyaygii hore ee xulka qaranka Argentina ee Diego Maradona ayaa soo duubay muuqaal qariib ah si uu u beeniyo in uu u dhimanayo xanuun maskaxda ku dhaca oo marka hore xusuusta qofka burburiya.
Wargayska dalka Argentina ka soo baxa ee Cronica ayaa daabacay warbixin uu ku shaaciyay in Diego Maradona uu la dhibtoonayo xanuun ku dhaca xiddidada maskaxda kaas oo keena in qofka xusuustiisu burburto wuxuuna Maradona soo saaray muuqaal uu arintan si adag ugu beeniyay.
Diego Maradona ayaa muuqaal soo dhigay bartiisa Instagram oo ay ku ixdhan yihiin 4.8 milyan qof wuxuuna sheegay in warka lagu baahiyay wargayska Cronica uu yahay mid been abuur ah.
Dhinaca kale qareenka Diego Maradona ayaa isna sheegay in aanu jirin waxa ugu yar oo cudurka la sheegay ah oo uu qabo halyaygii hore ee reer Argentina ee Maradona.
Maradona oo ka cadhaysan warka uu caafimaadkiisa ka qoray wargayska dalkiisa Argentina ee Cronica ayaa muuqaalka ku yidhi: “Iyagu been ayay sheegayaan, iyagu been ayay sheegayaan, waxay ka hadlayaan xanuunka maskaxda isla markaana iyagu waxba kama garanaan waxa ay la micno tahay”.
Xanuunka Maradona lagu sheegay ayaa ah “Alzheimer’ kaas oo ah xanuun ku dhaca maskaxda gaar ahaan xiddidada maskaxda ama neerfiska wuxuuna Maradona oo hadaliiisa sii wataa yidhi: “Kalmada “Alzheimer’ waa eray xun, dadku waxay u dhintaan ‘Alzheimer’, anigu ma dhimanayo. Wiilashaasi waxay ogyihiin waxay banaanka u soo tuureen si ay jaho wareer u abuuraan, anigu jaho wareer ma abuuro”.
Qareenka Diego Maradona oo magiciisa la yidhaa Matias Morla ayaa si adag u beeniyay warka xanuunkan lagu sheegay Maradona wuxuuna cadeeyay in aanu wax yar oo xanuunkan ah qabin.
Matias Morla ayaa sheegay in Diego Maradona uu maamulayo koox reer Mexico ah iyo shaqaalaha kooxdeeda isla markaana aanu wax dhibaato ah qabin.